Horumarinta e-commerce-ka internetka ayaa ka dhigtay shirkado badan oo hose hoop ah inay ku tartamaan inay la qabsadaan "tareenka dhakhsaha badan" ee ganacsiga, iyo soosaarayaasha hose hoop waxay u taagan yihiin saameynta ganacsiga e-commerce iyaga oo leh faa'iidooyinkooda gaarka ah, sidaa darteed shirkadaha hose hoop waxay horumarinayaan kanaalka internetka Waqtigaan, waxaa lagama maarmaan ah in si joogto ah loo xoojiyo dhismaha khadadka khadadka tooska ah, si soo saare kasta uu ula jaan qaadi karo horumarka waqtiyada, si loo suurtogeliyo shirkadaha inay sii socdaan.
Xirmooyinka tuubbada birta ee birta leh waxaa laga sameeyaa bir tayo sare leh, hanaanka waxsoosaarkuna aad ayuu u fiican yahay. Markii ay ka baxaan warshada, waxaa lagu soo rogayaa baaritaano badan oo adag. Way nabdoon yihiin waana la isku halleyn karaa waxayna leeyihiin awood lidi ku ah adkaysiga iyo adkaynta adkaysi aad u dheer. Sheygu wuxuu leeyahay muuqaal qurux badan, qalliin fudud, torque bilaash ah iyo guud ahaanba torque. Cidhifka tuubbada tuubadu way siman yihiin oo dhibna uma geysanaayo tuubada. Fiirshuhu waa siman yahay oo tuubada tuubada dib ayaa loo isticmaali karaa. Sidaa daraadeed, tuubbada birta ee birta ah waxaa inta badan loo isticmaalaa isku xirka tuubooyinka adag iyo jilicsan, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa istiraatiijiyadda saliidda, uumiga iyo dareeraha dareeraha ee qalabyada kala duwan ee gawaarida sida baabuurta, cagafyada, maraakiibta, matoorada shidaalka, matoorada naaftada, wixiyeyaasha, iyo dhismaha Dhismaha isku-xidhka bullaacadda, iwm, waa kan ugu horreeya dhammaan noocyada isku xidhka tuubooyinka tuubooyinka.
Dhowr habab rakibaadda tuubooyinka tuubbada ku shaqeeya
Habka rakibaadda saxda ah: Xarka tuubada tuubada waa in lagu dhejiyaa iyada oo loo eegayo qiimaha torque ee soo-saaraha.
Habka rakibaadda khaldan
1. In kasta oo tuubada tuubadu sidoo kale loo rogi karo qiime toosa oo ku habboon, isku-darka ballaadhinku wuxuu ku shaqeeyaa cadaadis, taas oo sababi doonta in tuubadu ay ka soo dhacaan geeska tuubada oo aakhirka sababaan inay tuubadu soo baxaan.
2. In kasta oo tuubada tuubbada sidoo kale loo rogi karo waqti ku habboon, ballaarinta tuubada iyo gariirka maxalliga ah ayaa ku qasbi doona tuubada inay dhaqaaqaan, taasoo sababi doonta inay tuubadu kacdo.
3. In kasta oo tuubbada tuubbadu sidoo kale adkayn karto, fiditaanka, kala-goynta iyo gariirida tuubada tuubada waxay sababi doontaa in darbiga tuubbada laga jaro xoogagga goynta, sidoo kale waxay dhaawici doontaa xoogga tuubada. Xirmooyinka tuubadu waxay sii wadaan inay gariiraan oo aakhirka waxay sababaan inay tuubadu sii daato.